Ahoana avy no Azo Ampiasana ny programa JW Library?
Ahoana avy no Azo Ampiasana ny JW Library?
Vakio ny Baiboly sy ny andinin-teny ho an’ny andro
Vakio ny Diary sy ny boky ary gazety. Ampiasao ilay marika mba hitadidiana hoe taiza no novakinao farany
Omano ny fivorian’ny fiangonana, ary lokoy ny valiny
Jereo ireo video
Jereo izay andinin-teny resahin’ny mpandahateny. Mbola voatahiry ao amin’ilay programa izay andinin-teny nojerenao faramparany, ka azonao iverenana jerena
Tsy voatery hitondra boky sy gazety be dia be ianao any am-pivoriana. Afaka manaraka tsara ny fandaharana sy mihira anefa ianao. Mbola tsy tafiditra ao amin’ny fihiranantsika ireo hira vaovao, nefa efa misy ao amin’ny JW Library
Ampisehoy zavatra ao amin’ny JW Library ny olona liana. Ampio koa izy handika an’ilay programa ao amin’ny fitaovana elektronika, ary haka boky sy gazety na video
Ampiasao ilay fanaovana fikarohana raha te hitady andinin-teny ianao
Ampisehoy video ny olona itoriana. Raha manan-janaka, ohatra, izy, dia mandefasa video ao amin’ilay hoe Ataovy Namanao i Jehovah. Azonao aseho koa ilay video hoe Nahoana Ianao no Tokony Hianatra Baiboly? mba hampirisihina azy hianatra. Raha hafa ny fitenin’ilay olona, dia video amin’ny fiteniny alefa
Raha mampiasa fiteny hafa ilay olona itorianao, dia Baiboly amin’ny fiteniny aseho azy. Adikao avy ao amin’ny JW Library anefa aloha ilay izy. Tadiavo izay toko sy andininy tianao hojerena, ary tsindrio avy eo ilay fijerena fiteny hafa